हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको कामै होइन । सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुवैलाई राम्रै लाग्ला, तर हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा सोचौँ ।
लोकतान्त्रिक देशमा सेनालाई नागरिक कार्यमा लगाउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा हुनुपर्छ । थाहा छैन भने दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदिभ्स र एसियान देशहरूको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ ।
दोस्रो साताको कोरोना लकडाउनसँगै मधेशमा गर्मी हलक्क बढेको छ । लकडाउनका नियम माओवादी बन्दका नियमभन्दा कडा छन् । मास्क नलाउनेको पुट्ठामा लाठी हिर्काउनु सामान्य भएको छ । कोरोना जाँच्ने उपकरणको अभाव छ । बन्दले बजारमा मच्चिएको छ हाहाकार । मानिसको जातलाई जसो गरे पनि दुःखै छ ।
प्रहरी जनताको निमेक खाएर जनताको सुरक्षाको लागि जागिरे भएका हुन् । लकडाउन अन्य देशमा पनि छ, तर लकडाउन नमान्ने जनतामाथि निर्मम कुटपिट गरेको कतै देखिँदैन । नेपाल र भारतका प्रहरीमा लकडाउन भनेकै जनतामाथि लाठी र बुट बर्साउने हो भन्ने हिंस्रक मानसिकता किन ? कानुनी राज्यमा नियमपूर्वक कारबाही गरौँ !
यो त अपराधै भयो । सबभन्दा धेरै टेस्ट हुनुपर्ने बेलामा आखिरमा किट नै छैन ! एक त भ्रष्टाचार, त्यसमाथि डब्लूएचओले स्वीकृत नगरेको किट ल्याउनु जनस्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड हो । सरकार हो, तयारीका गफ लास्टै पेल्नुभाथ्यो, आखिरीमा ताल देखियो !
१८ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेछन् । भागबन्डा नि भैसक्यो होला ।
के सिभिलियनले आफ्नो क्षमता गुमाएकै हुन् ? किन विश्वास गुमायो त सार्वजनिक निजामती प्रशासनले ? पूर्वप्रशासकहरूलाई बहसमा आउन अनुरोध गर्छु ।
सेनालाई प्रयोग गर्दा अख्तियार र छानबिनको गुञ्जाइस रहन्न । हेलिकप्टर, १८ करोडको गाडी, स्वास्थ्य सामग्री समेतको खरिद त्यताबाट गर्नुको एक मात्र उद्देश्य त उडी छुनु चन्द्र एक !